!! #Hla #Swe #ဒီနေ့မဲခွဲတာကမူလအဆိုရှင်ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ် #ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဇော်ရဲ့အဆိုကိုမဲခွဲတာပါ ၊ #သူ့အဆိုမှာ | democracy for burma
tags: ပုဒ်မ ၅၉ (ဃ) ဖြစ်တဲ့, “ကာကွယ်ရေးအမြင်”, “စစ်ရေးအမြင်”, ၁။၅၉ဃ မှာ သမ္မတ လုပ်မယ့်သူဟာ, ၂။ ၅၉ စ မှာ သမ္မတလုပ်မယ့်သူရဲ့, Burma, HLA SWE, Myanmar, NLD, parliament, VOTE
Hla Swe ဒီနေ့မဲခွဲတာကမူလအဆိုရှင်ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ် ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဇော်ရဲ့အဆိုကိုမဲခွဲတာပါ ၊ သူ့အဆိုမှာ ၁။၅၉ဃ မှာ သမ္မတ လုပ်မယ့်သူဟာ စစ်ရေးအမြင်ရှိရမယ် ဆိုတဲ့ဟာကို ကာကွယ်ရေးအမြင်ရှိရမယ် လို့ ပြင်တာ။ ၂။ ၅၉ စ မှာ သမ္မတလုပ်မယ့်သူရဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ဇနီးခင်ပွန်းတွေကိုနိုင်ငံခြားသားဖြစ်နေရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး ၊ ကျန်တာတွေ နဂိုအတိုင်းဘဲ ။ ၃။ ၆၀ ဂ မှာ ဒုသမ္မတ တွေ စပြီးရွေးရင်ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ရမယ် ။ ၄။၄၁၈ ခ မှာ တာဝန်မှရပ်စဲတဲ့ကိစ္စမှာအခြေခံဥပဒေကမည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဆိုတာကိုဖျက်တာ။ ၅။ ၄၃၆ က မှာ ၇၅% ကျော်ဆိုတာကို ၇၀%ကျော်လို့ပြင်တာ ။ ၆။ ၄၃၆ ခ မှာအစည်းဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိသောပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၇၀%အောက်မလျှော့သော လို့ပြင်တာ တွေ ပါ Share this:TwitterFacebookPrintPinterestRedditLike this:Like Loading...
from → Burma, HLA SWE, MYANMAR
← #တပ်မဟာ(၂) နယ်မြေ တိုက်ပွဲ #ပိုမိုပြင်းထန်
!! #คำสั่ง #หน. #คสช.#19/2558 #ม.44 →